Indwangu yokuhlunga ye-Pe - Umphakeli wendwangu yokuhlunga yeChina Pe, i-Factory -Sffiltech
I-polyester izwile yenziwa nge-100% i-filament polyester fiber.
I-polyester fiber edingekayo izwa ukuthi izinga lokushisa elijwayelekile alisetshenziswa njengenqubo eyakhiwe ngenaliti isebenzisa i-fiber staggered, isikhala sokusabalalisa umfaniswano ngendwangu enhle yefreyimu, isikhunta esisetshenziswa nge-polyester ne-polyester twint eyenziwe ngendwangu ngenaliti ezizwa isishisa, i-singeing, noma i-coating ngaphezulu, njengokuthunyelwa- ukucubungula, kwenze ukuthi ingaphezulu le-level yakhe ibushelelezi, akukho lula ukuthi kungavinjelwa uthuli, i-porility impahla esetshenziswayo, ukutholakala okuhle kulungile, sebenzisa kakhulu, ukumelana okuqinile kokuqina kwamakhemikhali, hhayi kuphela ukuhlunga igesi lokushisa kwekamelo, kanye nokuhlunga nge-acid negesi ye-alkali ewonakalisayo, futhi ingahlunga, isihlungi se-oyela, amanzi yisimo sokushisa esijwayelekile, ukwahlukanisa okuqinile koketshezi ezindaweni ezifana nezinto ezifanele zokuhlunga.
I-Breaking Elongation ingaphansi kwe-20% ye-MD ne-40% ye-CMD, i-shrinkage ephansi eyomile, ingasebenza kahle ku-130 deg C. impahla ishibhile kunenye impahla, isetshenziswa kakhulu ezinhlelweni eziningi zesikhwama sendlu.
I-polymester fiber edingekayo yazwakala isikhwama esingaphezulu kwesilinganiso sokumelana okunamandla kwesikhwama kunomphumela omkhulu. Isikhwama ekuqaleni kokumelana kwe-porosity sincike esikhwameni uqobo, futhi ukumelana okusebenzayo kukhulu kaningi kunokuphikiswa kokuqala. Ukuphikiswa okugijimayo kuya ngesilinganiso sendawo ebushelelezi yendawo yokuhlunga, umphumela wokususa umlotha, njll. Isikhwama sethemba elijwayelekile ekusebenzeni kwesihlungi, isiqinisekiso somoya ofanayo sikhulu, ngcono, ukumelana kuphansi, kungcono, ngoba kungonga amandla amaningi. Ekusetshenzisweni komoya othela uthuli umgibeli, ekucindezelweni okufanayo, ivolumu yomoya efanayo yothuli lomoya, ukukhethwa kwenani elikhulu lezinto ezifakwa ngomzimba okufanele zenziwe lapho isikhwama sokuhlunga singcono kunomphumela wokusika okungaphefumuli kahle. Ngakho-ke, kuzinto zokuqinisekisa kwesihlungi ukufezekisa ukunemba okuphezulu kokufakelwa, ukuthi ungasithuthukisa kanjani isikhwama se-porosity futhi ukhuphule izinga lobuso bushelelezi, ukunciphisa ukunamathela kothuli, ukunciphisa ukumelana okusebenzayo yilesi fektri yokuqukethwe kwesihlungi kufanele kuqala ukucwaninga ngesihloko. Ifektri yethu yathuthukisa ukusetshenzwa kokudonswa kobuso obusezingeni eliphakeme yasendlini, ubukhulu bayo bungaphezu kokuphothula okuvamile kwe-calender ngaphezulu kwe-50%, ephakeme kunaleyo yendawo yokuhlunga nenhlabathi ebushelelezi inkulu kakhulu kunengcindezi yokuphelelisisa.
Qeda kuyatholakala: sonified, ikhalenda, ulwelwesi lwe-PTFE, W / O